प्रकाशित मिति: 2015/08/27
सीताराम सापकोटा, पर्यटनमन्त्रीका सल्लाहकार
सीताराम सापकोटा संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री कृपासुर शेर्पाका सल्लाहकार हुनुहुन्छ । विसं २०२३ असार ८ गते खोटाङ जिल्लाको चिसापानीमा जन्मनुभएका सापकोटा सन् १९८७ देखि निरन्तर रुपमा पर्यटन क्षेत्रसँग उठबस गर्दै आउनुभएको छ । टानका पूर्वअध्यक्षसमेत रहनुभएका सापकोटाले एनएमए, एचआरएलगायतका विभिन्न पर्यटकीय संघसंस्थाहरुको नेतृत्व तहमा रहेर जिम्मेवारी बहन गरिरहनुभएको छ । टानमा दुई कार्यकाल कोषाध्यक्ष, एक कार्यकाल महासचिव हुँदै नेतृत्व तहमा पुग्दासम्म समग्र व्यवसायीहरुको मन जित्न सफल हुनुभएका सापकोटालाई निःस्वार्थ, इमानदार अनि निडर व्यक्तित्वको रुपमा लिन सकिन्छ । यही विशेषताका कारण पर्यटनका हरेक तह र तप्कामा उहाँको उपस्थिति अनिवार्यजस्तै बनिरह्यो । पर्यटन क्षेत्रमा प्रष्ट वक्ताको रुपमा समेत आफ्नो पहिचान बनाउन सफल सापकोटा पर्यटनमन्त्रीको सल्लाहकार भएपछि आफ्नो लाभभन्दा टाढा रहेर अरुको सहयोग अनि मुलुकको सिंगो पर्यटन विकासका निम्ति अहोरात्र खटिरहनुभएको छ । प्रस्तुत छ उनै सापकोटासँग प्रकाश खालिङले गर्नुभएको अन्तरंग कुराकानीः
पर्यटनमन्त्रीको सल्लाहकारको रुपमा तपाईंले मन्त्रीलाई कस्ता सल्लाह दिइरहनुभएको छ ?
म विगत तीन दशकभन्दा लामो समयदेखि पर्यटन क्षेत्रसँगै उठबस गरिरहेको छु । वर्तमान पर्यटनमन्त्री पनि कुनै न कुनै हिसाबले पर्यटनसँग धेरै नै नजिक हुनुहुन्छ । त्यसैले केही प्राविधिक कुराहरुबाहेक पर्यटनका समग्र गतिविधिहरुको बारेमा उहाँ आफैँ जानकार हुनुहुन्छ । मन्त्रीज्यूले सुरुदेखि नै औपचारिक तथा अनौपचारिक रुपमा पर्यटन व्यवसायीहरुलाई भन्नुभएको छ कि तपाईंका समस्याहरु के–के छन्, लिएर आउनुस् नीति निर्माणदेखि सहजीकरणका मामिलामा हामी काम गर्न तयार छौँ । विभिन्न संघसंस्थादेखि मजदुरहरुको कार्यक्रमहरुमा जाँदा पनि उहाँले यही भन्दै आउनुभएको छ । तर दुःखका साथ भन्नुपर्छ हाम्रा व्यावसायिक संस्थाका प्रतिनिधिहरु अहिलेसम्म केही पनि समस्या लिएर आउनुभएको छैन, मानौँ पर्यटन क्षेत्रमा कुनै समस्या नै छैन ।
यसरी समस्या नआउनुका कारणहरु पनि होलान् नि ?
मलाई लाग्छ, कृपासुर शेर्पाको मन्त्रित्वकालमा केही नीतिनिर्माणका कामहरु भयो भने यसको जस मन्त्रीलाई जाला, त्यहाँ सीताराम सापकोटा सल्लाहकार भएकोले त्यसको जस उनलाई जाला अनि यसको जस एमाले पार्टीमा जाला भन्ने त्रास साथीहरुमा परेको हुनसक्छ । यो बिल्कुलै गलत हो । म आह्वान गर्न चाहन्छु, पर्यटन मन्त्रालय विना भेदभाव काम गर्न तयार छ ।
पर्यटन क्षेत्रमा देखिएका विभिन्न गुट, उपगुटका कारणले पो यस्तो भइरहेको छ कि ?
हामी त्यस्तो कुरा गर्दैनौँ । मन्त्रीज्यूले बारम्बार भन्नुभएको छ कि म कुनै पार्टीविशेष, जातविशेष, धर्मसम्प्रदायविशेष, क्षेत्रविशेषलाई हेरेर काम गर्दिनँ । तसर्थ हामी गुट, उपगुट हेर्दैनौँ । समग्र पर्यटन क्षेत्रको, व्यवसायको, मजदुरहरुको समस्या लिएर जानका लागि पर्यटनमन्त्रीज्यू सदैव तत्पर भएर लागि पर्नुभएको छ ।
तपाईंले मन्त्रीलाई सल्लाह दिँदा बढी भाषणको लागि दिनुहुन्छ कि क्या हो ?
यस्तो आभाष तपाईं र व्यवसायीहरुलाई लागेको हुनसक्छ । तर कुनै पनि व्यावसायिक संगठनको नेतृत्वले यो प्रमाणित गरेर देखाउन सकोस् कि हामीले पर्यटनमन्त्रीसमक्ष यी–यी समस्याहरु राखेका थियौं, त्यसको समाधान भएन भनेर । मन्त्रीको टेबुलसम्म आइपुगेका समस्याहरु समाधान भएन भन्ने अहिलेसम्म छैन ।
देखिनेगरी भएका कामको विवरण प्रस्तुत गर्दिनुस् न त ?
मन्त्रीज्यूले मन्त्री पद सम्हाल्नेबित्तिकै लामो समयदेखि एनएसीको लथालिङ्ग अवस्थाको समाधानमा सक्षम नेतृत्व नियुक्त गर्नुका साथै नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण (क्यान)को नयाँ महानिर्देशक नियुक्ति गर्नुभयो । सँगसँगै पर्यटन बोर्डलाई निकास दिनका लागि केही नीति नियमहरुलाई परिमार्जन गरेर सीईओ नियुक्तिको प्रक्रिया अगाडि बढाउनुभयो । तर दुःखको कुरा पुराना साथीहरुलाई पनि समेटेर लैजानेभन्दा उहाँहरुले के सोच्नुभएको छ थाहा छैन, त्यसमा व्यवधान आइरहेको छ । त्यस्तै मन्त्रीज्यूले बारम्बार भन्नुभएको छ, एक जिल्ला, एक कार्यक्रमको अवधारणाको बारेमा । बजेटमा पनि पर्यटन पूर्वाधार विकासका लागि करिब एक अर्ब बजेट छुट्याइसकिएको छ । त्यस्तै, भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त विभिन्न पर्यटकीय हिसाबले महत्वपूर्ण पुरातात्विक, धार्मिक एवं साँस्कृतिक सम्पदाहरुको पुनर्निर्माण तथा निर्माणका लागि आवश्यक बजेट समेत छुट्याई डिजाइनिङको काम करिब अन्तिम चरणसम्म पुर्‍याएको छ । यीलगायत राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय पर्यटन प्रवद्र्धन तथा विकासका लागि विभिन्न कामहरु भएका छन् । साथै अन्य कामकार्यक्रमहरुलाई पनि तीव्रताका साथ अघि बढाइएको छ ।
पर्यटनमन्त्रीले नेपाल वायुसेवा निगमलगायत विभिन्न निकायहरुलाई एमालेकरण गरेर आफ्नो मान्छे भर्ती गर्ने थलो बनाएको भन्ने आरोप पनि आउने गरेका छन् नि ?
विल्कुलै गलत । नेपाल पर्यटन बोर्ड सञ्चालक समितिमा निजी क्षेत्रको जम्मा पाँच जना प्रतिनिधिमध्ये ३ जना एमाले बाहेकका छन् । मन्त्रीज्यूले नियुक्त गर्नुभएको क्यान, नेपाल वायुसेवा निगमका प्रमुखको बारेमा पनि तपाईं आफैँले हेर्न सक्नुहुन्छ एमाले हो कि होइन भनेर । एनपीटीसीको गठनमा १० प्रतिशतभन्दा पनि कम मात्रै एमाले र त्यसबाहेक सबै अरु पार्टी तथा स्वतन्त्र नै छन् र अन्य कर्मचारी नियुक्तिको कुरामा मन्त्रीज्यूको सिफारिसमा एक जना पनि कर्मचारी निगममा नियुक्त भएका छैनन् ।
पर्यटन बोर्डमा त मन्त्रीको हस्तक्षेप भएको आभाष हुन्छ नि ?
वर्तमान पर्यटनमन्त्रीले सिफारिस गरेर ल्याउनुभएको कोही पनि व्यक्ति अहिले नेपाल पर्यटन बोर्डमा छैनन् । पर्यटनमन्त्री आउनेबित्तिकै तत्काल बोर्डको सीईओ समस्या टुंगो लगाऊ भनेर पर्यटन बोर्डलाई निर्देशन दिइएबमोजिम विज्ञापन सार्वजनिक भयो र नयाँ १२/१३ जनाको आवेदन पर्दापर्दै पुराना १२ जनामध्येका केही आवेदकले अदालतमा मुद्दा दायर गर्नुभयो, पुरानामध्येबाटै हुनुपर्छ भनेर, अदालतले स्टे अर्डर जारी गरेपछि प्रक्रिया रोकिएको छ ।
तपाईं पर्यटन क्षेत्रका हरेक समस्याहरुको भुक्तभोगी व्यक्ति । कुनै समय समग्र पर्यटन व्यवसायीहरु जेटीसीसीमार्फत एकताको सूत्रमा बाँध्ने अभियान चलेको थियो तर अहिले त्यो कुरा निक्कै विवादित बनिरहेको छ । विशेषगरी तपाईंलगायत जेटीसीसीविरुद्ध खरो रुपमा उत्रिनुभएको छ नि, किन ?
जेटीसीसी पर्यटन क्षेत्रको लागि कुनै आधिकारिक संस्था होइन । कुनै समयमा यो एउटा मोर्चामा थियो । जेटीसीसी विशेषतः पर्यटन बोर्डमा भएको विकृति, विसंगति र अनियमितताविरुद्ध खडा भएको मोर्चा थियो । त्यतिबेला करिब सबै राजनीतिक दल, सांसद्हरुले ऐक्यबद्धता जनाएका थिए । मोर्चाको जुन उद्देश्य थियो त्यो प्राप्त भइसक्यो । यसको मतलब बोर्डमा छानबिन होस् भनिएको थियो, छानबिन समिति बन्यो, अख्तियारद्वारा विशेष अदालतमा मुद्दा नै दायर गरेसँगै यो मोर्चा औचित्य सकियो । स्वतः विघटन भएको छ । तर अहिलेसम्म पनि केही साथीहरुले जेटीसीसीलाई गरिखाने भाँडोको रुपमा उपयोग गरिरहनुभएको छ । यो भन्दा हास्यास्पद कुरा अरु के हुनसक्छ ?
एमालेलगायत पार्टीनिकटका व्यवसायीहरुले जेटीसीसीको औचित्य समाप्त भएको भन्दै बाहिरिएको बेला एमाओवादीको एउटा पक्ष र कांगे्रस निकट व्यवसायीहरु जेटीसीसीकै पक्षमा उभिएका छन्, खास कुरा के हो ?
यहाँभित्र मर्ने बेलामा हरियो काँक्रो भनेजस्तै भइरहेको छ । उहाँहरु ४०/४२ वटा संघसंस्था छन् भन्नुहुन्छ, पहिल्यै पनि ४१ वटा संस्थाहरु थिए । प्रष्ट रुपमा भन्दा एचआरए, एनटीभीए, पाटा, युटिन, नेपाल पर्यटन व्यवसायी संगठनलगायत १६÷१७ वटा संस्थाले जेटीसीसी छोडिसक्नुभएको छ । आन्दोलन गरेका, रिले अनशन बसेका, साथीहरुले नै जेटीसीसीको औचित्य समाप्त भएको भनेर बाहिर बस्नुभएको छ अरु त के कुरा गरौँ र ।
तपाईंहरु जेटीसीसीबाट बाहिरिसकेपछि अब समानान्तर संस्था बनाएर जेटीसीसीको औचित्य समाप्त भएको पुष्टि गर्नुहुन्छ कि कसरी अघि बढ्नुहुन्छ ?
जेटीसीसीको औचित्य समाप्त भएको पुष्टि गरिरहनुपर्ने कुनै आवश्यकता नै छैन । त्यो कुरा घामजस्तै छर्लंग छ । भोलि कतै आवश्यकता परेको खण्डमा सायद जेटीसीसीभन्दा पनि ठूलो मोर्चा बन्न सक्दछ । तर अहिले नै त्यसको आवश्यकता छैन भन्ने लाग्छ ।
पर्यटन क्षेत्रको मौलाउँदो गुट/उपगुट देख्दा कहिलेकाहीँ तपाईंलाई पर्यटनको भविष्यबारे चिन्ता लाग्दैन ?
साथीहरुले बुझ्ने हो भने यतिबेला पर्यटन क्षेत्रलाई राम्रोसँग बुझेको पर्यटनमन्त्री हुनुहुन्छ, म सल्लाहकारको रुपमा छु । मैले पनि पर्यटन क्षेत्र राम्रोसँग बुझेको छु । यतिबेला जतिसक्दो धेरै नीतिगत निर्णय गरेर पर्यटन क्षेत्रको विकासमा जुट्नुपर्ने हो । यसबाट उहाँहरुलाई नै फाइदा पुग्ने हो । केही साथीहरुको संकुचित सोचका कारण सिंगो पर्यटन क्षेत्र अन्योलमा राखिनुहुन्न ।
एनएमए पीकको विषयको विवादमा मन्त्री र तपाईको पार्टी एमालेमाथि पनि दोष लागेको छ यो खास के हो ?
धेरै साथीहरुले त बुझ्नुभएको छैन होला । तर यो लाञ्छना लगाउने साथीहरुलाई म भन्न चाहन्छु कि यदि उहाँहरुले पढ्नुभएको छैन भने कखरा पढ्न गए हुन्छ । नेपालको अन्तरिम संविधानमा सरकारको राजस्व सञ्चित कोषमा जम्मा हुनेछ भन्ने प्रष्ट उल्लेख गरिएको छ । दोस्रो कुरो पर्यटन मन्त्रालयले यस्तो कार्य गर्ने भए स्वयं मन्त्री किन अदालतमा र संसद्को अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सम्बन्ध समितिमा जवाफ दिन जानुपथ्र्यो ? जवाफमा मन्त्रीले के पनि भन्नुभएको थियो भने यदि उक्त निर्णय गर्ने हो भने पनि यत्रो इतिहास बोकेको आरोहीहरुको संस्थालाई अर्को व्यवस्था गर्नुपर्छ भनेर । यो कुरा बुझी–बुझी उहाँहरु किन सम्पूर्ण व्यवसायी, आरोहीहरुलाई समेत भ्रममा पार्ने खेल खेल्नुहुन्छ ?
टानको पूर्व–अध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ, अहिले टान निर्वाचनको विषयले पर्यटन बजार तातिएको छ, यसमा तपार्इंको धारणा के छ ?
टान निर्वाचनले बजार तातेकै त म भन्दिनँ । तर केही साथीहरुमा उत्सुकता जागेको पक्कै हो । टानको निर्वाचनको मिति कहिलेका लागि तोकिने हो अनि यहाँ कुनै उम्मेदवारभन्दा पनि आम व्यवसायी साथीहरु को–को कुन–कुन पदमा उठ्ने हुन्, को–को मिल्लान् भन्ने बहस छलफलहरु सुरु भएका हुन् जस्तो लाग्छ । आगामी नेतृत्वका लागि टानको वर्तमान कार्यसमितिबाट धेरै कुरा सिक्न सकिन्छ । टानको नेतृत्वमा समग्र पर्यटन बुझेको र सबल पर्यटन व्यवसायी हुनुपर्छ । पर्यटनका विभिन्न आयामदेखि लिएर नीतिनियम बुझेको हुन आवश्यक छ । त्यस्तै, लोभीपापी हुनुभएन । टानमा बजेट छ, म त्यो सिध्याउँछु हैन, म काम गर्छु भन्ने दृढ इच्छाशक्ति भएको मान्छे जानुपर्छ । अर्को कुुरा गुटमात्रै होइन, आम व्यवसायीलाई समेटेर अगाडि बढ्न सक्ने क्षमताको व्यक्ति हुनुपर्‍यो र निष्कलंक हुनुपर्‍यो ।
भनेपछि अहिलेको नेतृत्वमा त धेरै समस्या पो रहेछन् त ?
धेरै छन् । एनएमएको विषय र गतिविधिप्रति टान चुप लाग्यो । किनकि वर्तमान कार्यसमितिमा पीक चलाउने व्यक्ति नै छैन । अचानोको पीर खुकुरीलाई के थाहा भनेजस्तै भएको छ । यत्रो भूकम्प गयो, उद्धार र राहतका काममा टान कतै देखिएन । डाटा उतार्ने कामहरु केही भएका छैनन् । चार महिना बितिसकेको छ, लाङटाङलगायतका गन्तव्यहरुको अवस्था ज्यूँकात्यूँ छन् । टान लाचार छ, झारा टार्ने र भएको बजेट सिध्याउने काममा उहाँहरु लाग्नुभएको छ । अरुले गरेको काममा आफ्नो संलग्नता भएन भनेर विरोध गर्दै हिँड्नुहुन्छ । यस्तो टानको लिडरसिप आगामी दिनमा टानले मात्रै होइन, अरु पर्यटकीय संघसंस्थाले पनि भोग्नु नपरोस् ।
टानमा आर्थिक अनियमितता छ ?
अनियमितताको सवालमा पैसा नै खायो भन्ने हैन । ट्रेकिङको बाटो बनाउने ठाउँमा आमासमूह, बाउसमूह, मठमन्दिर, विद्यालय बनाउने काममा खर्च गर्नु भनेको एउटा अनियमितता नै हो । त्यस्तै मजदुरका सवालमा खै के काम भएका छन् ?
तपाईले भनेजस्तो सक्षम अनि निष्कलंक भावी नेतृत्वको नाम सुन्न पाए हुन्थ्यो ?
अहिले नाम नभनौँ । टानको निर्वाचनको मिति पनि तोकिएको छैन । यसमा एकसे एक साथीहरु हुनुहुन्छ । कसैलाई असक्षम भन्न मिल्दैन । उम्मेदवारमध्येमा उल्लेखित गुणहरु भएको मान्छे हुनुपर्छ, यसमा जाति क्षेत्र लिङ्ग भनेर हेर्नु हुँदैन । प्रष्ट कुरा चाही के हो भने जेटीसीसीको सिफारिसमा टानको नेतृत्व कुनैपनि हालतमा हामी मान्यता दिदैनौं ।